Dabaal-degyada Madaxbanaanida Eritrea Oo Ka Socda Dalalka Caalamka – HCTV
Dabaal-degyada Madaxbanaanida Eritrea Oo Ka Socda Dalalka Caalamka
Ahmed Cige 0	May 26, 2019 10:20 am
Ethiopia Oo Xaqiijisay Qofkii Labaad Ee U Geeriyooda Coronavirus
Qaramada Midoobay Oo Somaliland U Soo Jeedisay In La Ixtiraamo Xorriyadda Hadalka
Akhri: Xukuumadda Oo Xisbiyada Mucaaradka Ah Ugu Baaqday Inay La Shaqeeyaan Komiishanka Cusub Ee Khilaafku Ka Taagan Yahay
Asmara, (HCTV) – Dadka reer Eriteriya ayaa u dabaal degay sannad-guuradii 28-aad ee madax-bannaanida, oo loo sameeyey abaabul heer sare ah.
Tobanaan kun oo ka mid ah muwaadiniin Eritrean ah ayaa calaamad u ahaa dabaaldegga Maalinta Xoriyadeed oo ay ka qaybqaateen qaybaha bulshada iyo musicka, iyo ciyaaro qoob-ka-ciyaaro ah ayaa si balaadhan loogu dabaal degay May 24.
Isagoo ka hadlayay dabbaaldegga maalinta madax-bannaanida 28-aad ee caasimadda Asmara, madaxweynuhu wuxuu amaanay adkaysiga Eriteriyaanka ah ee ka soo horjeeday Dagaalkii Labaad ee ee loo marayo halganka madax-bannaanida iyo dagaalka ka dib.
“Muddo konton sano ah, dadka reer Eritrea waa inay ka soo horjeedaan hoos-u-dhigida siyaasadeed ee loogu talagalay in ay abuuraan kala qaybin iyo kala-qaybin; tartan iyo guul ka soo kabasho iyo shaqeyn; iyo, in la sameeyo halgan sodon sanno ah oo leh geesinimada iyo samaynta si aan u gaadhno xorriyadda iyada oo ku saleysan kor-u-qaadista xukunka sharciga. “Ayuu yidhi Madaxweynaha dalka Eritrea.
“50-kii sano ee la soo dhaafay, dadka reer Eritrea waxay la kulmeen oo ay ku guuleysteen in ay ku biiraan colaadaha dibadda. Waxay sidoo kale xaqiijiyeen madax-banaanideeda iyo xoriyadooda iyagoo la dagaallamaya rabitaanka siyaasadeed ee kala-qaybsanaanta sunta ah, oo ay ka mid yihiin dagaal ooge xag jir ah; iyada oo si joogta ah loo xoojiyo wada-xaajoodkooda siyaasadeed. Wuxuu ku daray Madaxwaynaha Eritrea Isaias Afwerki wuxuu xasuusiyay dadkiisa sidii ay u xoojin lahaayeen adkeynta Eritrea.
Sannadguuradii 28aad ee madax-bannaanida waxaa lagu muujiyay dhaqdhaqaaqyo dhaqameed iyo isboorti, qoob ka ciyaaro, iyo hawlo kale.
Dhinaca kale Muwaadiniinta Eriteriya ee Switzerland, Jarmalka iyo Kanada ayaa si farxad leh u dabbaal-degay sannad-guuradii 28-aad ee Maalinta Xorriyadda.
Munaasabadda dabaaldegga lagu qabtay 18-kii March ee magaalada Bern ee dalka Switzerland, oo tiro badan oo muwaadiniin ah ka qaybqaatay, madaxa xafiiska bulshada iyo arrimaha bulshada Mudane Sileshi Idiris oo muujinaya waqtiyada dalxiisayaasha ee Eritrea ay tahay inay dhex maraan halganka hubaysan madax-bannaanida iyo ilaalinta madax-bannaanida qaranka, wuxuu ku baaqay in la xoojiyo midnimada iyo ka-qaybgalka dadaalka lagu hubinayo in fursad loo siiyo muwaadiniinta.
Sidoo kale, muwaadiniin Eritrean ah oo deggan Frankfurt ayaa u dabaal-dagay sanad-guuradii 28-aad ee madax-bannaanida oo leh jacayl waddaniyadeed.
Munaasabadda, Xoghayaha Arrimaha Dibedda ee Safaarada Eritrea, Yohannes Woldu ayaa warbixin kooban ka bixisay xaaladda dhabta ah ee waddanka.
Sidoo kale, muwaadiniinta Eritrea ee ku nool Winnipeg, Kanada ayaa sidoo kale dabaaldegay sannad-guurada madax-bannaan oo barnaamijyo kala duwan oo muujinaya xidhiidhka dalkooda.
“Iran Way Iska Difaaci Doontaa Gardaro Kasta” Wasiir Javad Zarif